Xulka Qaranka Soomaaliyeed oo Murugo la hoyatay. | stn radio	Friday, November 28th, 2014	Home
Xulka Qaranka Soomaaliyeed oo Murugo la hoyatay.
Nov 25, 2012 - Aragtiyood	Xulka Qaranka Soomaaliya ee loo yaqaan (Xidigaha Badweynta) ayaa maanta iyad jab iyo murugo kala soo dareeray garoonka kubbadda cagta Mandela National Stadium oo ku yaala magaaladaKampalaee dalkaUgandakadib markii cayaar ka tirsan Cecafa Cup 2012 ay la yeesheen dhigooda dalkaBurundi.
Kulankan oo ahaa kii afaraad oo ay isaga horyimaadaan labada tan iyo sanadkii 2000, iyadoo saddexdii kulan ee hore Soomaliya looga kala badiyey 3-0, 2-0 iyo 4-1 wuxuuna kulanka manta noqonayaa kii ugu xumaa ee xulka Soomaliya kala kulmaan xulka dalka Burundi.
Xulka Brundi ee maanta ay wada cayaareen xulka Soomaaliya ayaa iyagu tababar ku soo qaatay dalka Jarmalka, halka xulka Soomaliya la isku soo aruuriyey markii uu soo dhawaaday tartanka, waxayse muddo usbuuc ah ku taabar qaateen dalkaUgandaoo ay yimaadeen 9-kii bishan Novembar.